Ethakazelisayo Ikhadi lokudlela adalwe Steve Jackson kuboniswa uJohane Kovalik, uthole igama yokuqala "Munchkin". A umdlalo webhodi kuyinto inkulumo yokulingisa yomdlalo Ekwenza Umlingiswa okusekelwe nomqondo munchkins - intsha esebenza ukuze 'ukunqoba' futhi abhubhise lonke izilo, futhi hhayi iqembu nokuxhumana, noma injabulo indima. Ukudalwa Onjiniyela American ukhishwa ngokuthi "Kuhle Traditional Card Game" ngo-2001 futhi ovela eceleni yencwadi yamahlaya enikelwe ukuzijabulisa okunjalo. Ngemva impumelelo, okuyinto wathandwa izilaleli lokuqala "Munchkin", umdlalo wayithi izengezo ezimbalwa futhi sequels futhi liye lahunyushelwa ezilimini ezingu-15.
Inhloso inqubo mdlalo ukuze kuzuzwe 10 noma 20 ezingeni ( "Epic" Imodi). Yilelo nalelo lungu iqala nge iyunithi, kubalulekile ukuba ifike ezingeni eliphakeme ngokubulala ezilo noma ngezinye izindlela. Ezinye izindlela zihlanganisa ukudayiswa igolide noma ukusebenzisa amakhadi ezikhethekile ukuthuthukisa. Njengomthetho, ihora elilodwa isikhathi sifana omunye round igcwaliswe kuyinto "Munchkin". Lo mdlalo isebenzisa amathuluzi ambalwa: ezimbili onezitezi zamakhadi die eziyisithupha emaceleni. Kodwa, njengoba abalobi bathi, inhlanganisela yabo ungavula inkampani abavamile ibe isixuku zibuthuntu laughing hysterically.
"Inkanyezi Munchkin" yakhululwa ngo-2002. Lokhu yisihumusho se-elingalodwa umdlalo, futhi akuhloselwe for ukuhlangana nabanye onezitezi of amakhadi, ngaphandle uma kwenzeka lapho umdlali 'osangene ngokwanele ukuyizama. " A inkulumo yokulingisa ezihlekisayo of ukuguqulwa, ikakhulukazi yesayensi bebonke, futhi ngokukhethekile "Star Wars" futhi "Star Trek" amelela esivelele uhlobo. imidlalo eminingi efana «Engamajele & Dragons», ogama njongo iwukuba lutho esingaphansi ukumehlula inombolo enkulu izilo - ". Star Munchkin" ukuthi uzonikhumbuza
Lo mdlalo ihlanganisa ukushiywa kwezingane zinganakekelwe yini ayehlela onaleso simo sengqondo kuyindida ngase yesayensi. Kule-version, ungathatha mate: kuyokusiza e izikhali ekuthwaleni, ukunikeza amabhonasi ezengeziwe noma ukwazi zizinikele ukukusindisa monster. Ukudlala amageyimu ugcwele amahlaya hilarious futhi ezilula, ezinye zazo kuyoba abalandeli sobala omkhulu kuphela imisebenzi athandwa kwalesi uhlobo.
Ukuhlobisa sigcwalisa ngokuphelele lesi engenangqondo we "Munchkin". Umdlalo neze kusimangaze ukuthi ngisho amakhadi ezifanayo ube imifanekiso ehlukene - lokhu ibha kancane bayazisa abadlali abaningi. "Inkanyezi Munchkin" - umdlalo ngokumangalisayo fun elifika engqondweni eziningi izinkumbulo, kodwa isizathu ukuthi ungahlala khona kuze kuphele amahora 4 ekuseni - ke essence nonya futhi iyakhohlisa. Abadlali yakha umfelandawonye ukuba anqobe ezilo noma izimbangi etafuleni, ngesikhathi esifanayo ngizibuza indlela esheshayo ukufinyelela ezingeni 10. Umdlalo ilungele labo abasondelene umoya wokuncintisana enempilo phakathi kwesibambisene nabo.
Technique Zelmer, ukubuyekezwa kanye izici
Yidla kwesokudla. Yini ukudla carbohydrate?